Madaxweyne Xasan Shiikh oo amar ku bixiyey in la xoojiyo amniga heyadaha garsoorka dowlada | Salaan Media
Madaxweyne Xasan Shiikh oo amar ku bixiyey in la xoojiyo amniga heyadaha garsoorka dowlada
Madaxweyne Xasan Shiikh oo amar ku bixiyey in la xoojiyo amniga heyadaha garsoorka dowlada.
Madaxweynaha dowlada Somalia Xasan Shiikh Maxamuud ayaa sheegay in heyadaha amniga dowlada oo amar buuxa ku siiyey iney xoojiyaan sugida amaanka xarumaha garsoorka dowlada ee ku yaala magaalada Muqdisho.
Warsaxaafadeed ka soo baxay xafiiska Madaxweynaha ayaa lagu faray heyadaha amniga dalka iney si deg deg ah u fuliyaan amarkaas oo u muuqda mid looga jawaabayo weerar toogashooyin iyo isqarxin isugu jira oo maalmo ka hor kooxo ka tirsanaa Al-shabaab ay ku soo qabsadeen xarunta maxkamdaha gobolka Banaadir kaasoo sababay dhimashada ku dhowaad 40 qof iyo dhaawaca 60 kale.
Madaxweynaha ayaa dhinaca kale ku adkeeyey saraakiisha amniga in baaritaanada weerarkii dhowaan ka dhacay xarumaha Garsoorka dalka ay ka soo saaraan natiijo lagu qanci karo oo ku saabsan sida ay wax u dhaceen.
“Inuu jiro welwelka, walbahaarka iyo cabsida Mas’uuliyiinta Maxkamadaha iyo shaqaalaha kale ee dowladda waan qirsanahay, waxaan balanqaadayaa in la sugi doono amaanka dhamaanba xarumaha dowladda” ayuu yiri Madaxweynaha Somalia.
Madaxweynaha ku booriyey Ciidamada dowlada iyo kuwa Midowga Afrika ee AMISOM iney qaadaan talaabooyin lagu adkeynayo guud ahaan amniga.
“Saraakiisha laamaha amniga waxaa laga rabaa iney natiijo rasmi ah kasoo saaraan dadaalada ay wadaan ee ku aadan baaritaannada weerarkii lagu qaaday xarunta Maxkamadaha, waana iney la yimaadaan talaabooyin lagu adkeynayo amniga xarumahaasi si looga hortago weeraro kale” ayuu mar kale yiri Madaxweynaha.